1 - best logo maker app for mac. I-Import.io
I-Import.io iyisevisi enamandla yokukhipha idatha yewebhu elandela izindlela ezilula zokukhipha idatha. Lokhu kungakha amadasethi akho bese ufaka idatha kusuka kwelinye ikhasi lewebhu kwenye. Ngaphezu kwalokho, ungagcina idatha oyifunayo ku-disk yakho eyinkimbinkimbi, futhi i-Import.io ayidingi noma iyiphi ikhodi yokukhipha amakhasi amaningi wewebhu.
i-CloudScrape iyisiphequluli sewebhu esiphequluli esiphezulu nesiphequluli se-intanethi esisiza ukukhipha idatha enkulu ngaphandle kwenkinga. Isinika isikhungo sokulondoloza idatha kumapulatifomu e-cloud storage efana ne-Box.net ne-Google Drayivu..Ungakwazi futhi ukugcina idatha yakho ngesimo se-CSV ne-JSON. Ngenye yezinsiza ezinamandla kunazo zonke futhi ezinzulu kakhulu zokususa ifu kwi-intanethi esiza ukuhamba ngezindawo, igcwalisa amafomu, ukwakha ama-robot nokukhipha idatha yesikhathi sangempela.
I-Visual Web Ripper yisisombululo esisodwa sokumiswa kwedatha isizinda, nokuvuna iwebhu. Lenye yezinsiza zewebhu zewebhu ezinamandla kunayo yonke. Ithuluzi liqoqa idatha kokubili ifomu yombhalo nesithombe. I-ke ihlela idatha ngokusekelwe ezimfuno zakho futhi imiphumela ihlale igugu futhi iyasiza.